Maxaad ka ogtahay qaabka ay u dhacayso dacwadda Trump ee maanta furmaysa? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maxaad ka ogtahay qaabka ay u dhacayso dacwadda Trump ee maanta furmaysa?
Maxaad ka ogtahay qaabka ay u dhacayso dacwadda Trump ee maanta furmaysa?
Markii sedexaad oo kaliya ayaa codka kalsoonida loo qaadanayaa madaxweyne Maraykan ah , iyada oo maanta la filayo in ay bilaabato dhagaysiga dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump.
Dacwad oogistan oo ka furmaysa Aqalka Sare oo markan gudanaya waajibaad garsoor, ayaa fikrad ahaan waxa ay horseedi kartaa in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha, taas oo noqon karta arrin lama filaan ah, balse xaqiiqda ah in madaxweynaha uu wajahayo dacwad ayaa ah dhacdo weyn laf ahaanteed.
Mid ka mid ah sababaha lagu muteysto in madaxweyne xilka looga qaado ayaa waxaa ka mid ah qiyaamo qaran, laaluush ama dambiyo kale oo waaweyn.
Trump waxyaabaha lagu eedeeyay waxaa ka mid ah ku tagrifal awoodeed, isaga oo la sheegay in dowladda Ukraine uu damcay in gargaar military uu kaga badesho in ay dacwad ku oogaan qof ay siyaasada isku hayaan.
Sidoo kale Aqalka Congress-ka ayaa Trump ku eedeeyay in uu baalmaray Aqalka kadib markii uu diiday in shaqaalaha Aqalka Cad ay qiraal ka hor sameeyaan xildhibaanada.
Trump ayaa eedeymahan ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad toona lahayn, kuwaas oo xad gudub ku ah dastuurka.
Waxaase xusid mudan in arrimahan aysan wax xiriir ah la lahayn baaritaankii Robert Mauller ee ku saabsanaa fadeexadda farogalinta Ruushka ee doorashadii dhacday 2016-kii.
Qaabka ay u dhacayso dacwadda
Marka laga hadlayo dastuurka Maraykanka, aad uguma kala cadda hab-raaca loo marayo dacwad oogista madaxweynaha, marka laga reebo xeerar guud oo arrintan quseeya.
Labo qof ayaa go’aan ka gaaraya hab-raaca, waxayna kala yihiin Mitch McConnell oo ah hoggaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee Trump, kaas oo doonaya in si dhaqsi ah lagu soo dhameeyo dhagaysiga, go’aana laga gaaro.
Wuxuu doonayaa in dhinac kasta uu siiyo 24 saac in ay kusoo bandhigaan cadaymaha ay hayaan, taas oo ka dhigan in saacado dhaadheer la fadhin doono Aqalka Gudihiisa.
Ninka kale waa Chuck Schumer oo ah hoggaamiyaha xisbiga Dimoqoraadiga ee Aqalka Sare, wuxuuna qabaa in ninka dhiggiisa uu doonayo in ay is hortaago caddeymo lasoo bandhigi lahaa.
Waxaa mamnuuc ah in wax lagu qoro degelka Twitter-ka, waxaa kale oo mamnuuc ah in xldhibaanada Aqalka Sare ay la hadlaan qofka agtooda fadhiya, iyo in sidoo kale wax caddeymo ama waraaqo dheeraad ah laga keeno banaanka Aqalka inta dhagaysiga uu socdo.
Marka ay labada dhinac dhagaystaan, xildhibaanada Aqalka Sare waxa ay haystaan hal maalin si ay go’aan oga gaaraan in ay cod galiyaan dacwadda Trump iyo in kale.
Balse maadaamaa dimoqoraadiyiinta ay haystaan 47 xildhibaa, halka jamhuuriga ay haystaan 53 xildhibaan, waxaa aad loo filayaa in Trump aanan xilka laga qaadin, xitaa haddii cod la galiyo.
Tiro 51 xildhibaan ah ayaa sidoo kale u codeyn kara in gebi ahaanba la laalo dacwadda Trump ka dha ah.
Xildhibaan kasta wuxuu ku dhaartay in si dhexdhexaad ah oo caddaalad ah uu codkiisa u dhiiban doono, balse Mudane McConnel waxa uu bishii hore sheegay in uusan isaga dhexdhexaad ahayn, islamarkaasna xisbigiisa uu si dhow ula shaqaynayo Aqalka Cad.
Balse isaga ma ahan kan guddoomiyana dhagaysiga dacwadda, waxaa hawshaas qabanaya xaakimka maxkamada sare John Roberts , inkasta oo 100 xildhibaan ay qaadan doonaan doorka garsoorka iyo doorka xeerbeegtidaba si isku mid ah.
Trump laftiisa waxa uu doorbidi karaa in uu hortago Aqalka, Balse waxa ay u badantahay in uu garyaqaanadiisa u dhaafo hawsha.
Xildhibaanada Aqalka waxa ay gebi ahaanba diidi karaan in ay u yeeraan marqaatiyo.
Marka laga reebo maalinta axadda ah, xildhibaanada waa ay kulanka fadhiyaan maalin kasta illaa inta ay go’aan ka gaarayaan, taas waxa ay ka dhigantahay in xildhibaanada kala ah Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar iyo Michael Bennet oo ka tirsan xisbiga dimoqoraadiga ay hakiyaan ololaha ay ugu jiraan xilka madaxweynenimada muddo maalmo ah.
Waxa la sheegay in dacwadda ay qaadan karto muddo todobaadyo ah, tusaale Clinton xiligiisii waxa ay qaadatay muddo bil ah.
Previous articleDAAWO:NISA oo caawa soo bandhigtay fanaanka Al-Shabaabka ah ee la xiray
Next articleMusharaxiinta xilka Madaxweynaha Galmudug oo qaadacay ka qeyb galka doorashada uu qabanayo Guddigii kala qeybsamay
Ninkii naqshadeeyay mid kamid ah teleefoonada ugu qaalisan caalamka oo shaqada ka tagaya
Madaxweynaha Somaliland oo la kulmay Safiirka Midowga Yurub ee Somaliya
Maxay ka wada hadleen RW Khayre & Wasiirka Arrimaha dibeda ee dowlada Sweden?
Madaxweyne Farmaajo oo ka Dhoofay Jabuuti kuna sii jeeda Dalka Turkiga, Ogow Ujeedka Safarkiisa?
Sawirro:-Madaxweyne Waare Oo Booqday Dekadii Hore Ee Ceel Cade Iyo Garoonkii Diyaaradaha Cisaley
Jen. C/raxmaan Guulwaade oo sheegay inuu sax ahaa duulaankii dowladdii Milateriga ku qaaday Gobolada Waqooyi
AQRISO: Taariikh nololeedka Allaha Haunaxariistee wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil
DEG DEG:Qarax ka dhacay Gaalkacyo iyo taliye ku dhaawacmay
Maxoow RW Kheyre kayiri arintii maanta sida weyn u hadal hayeen laamaha amaanka
DHAGEYSO:Qeybo katirsan Suuqa bakaaraha oo dab ka kacay balse kadib maxaa dhacay